“Hoggantoota ODP Wajjiraalee Federaalaa Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Hoggantoota ODP Wajjiraalee Federaalaa
Manni hojii Federaalaa bakka cunqursaa fi dhiibbaamuu ilmaan Oromoo itti babal’achaa jiru. Keessattu Mana hojii Ministeeronni ODP hoganan keessatti immoo dhimmi kun ni cima. Saamichi qaarshii raawwatamu immoo abbaa kanaa kan jedhu hin jiru. Akka fakkeenyaati qabatama jiru kaasuun yoo barbaachise Ministeera Qonnaa fi Bishaanii eeruun ni danda’ama. Hogantoonni Mannee hojii kanneen lamaa duuba duuba sabboontotaa fi namoota hojiif dhimmama qaban fakkaatu. Keessattuu Obbo Umar Huseen akka namoota kaanii Oromoo ajjesisuun komiin isa irrati ka’u jiraachuu baatullee hojii ajjeesuun maqaa Oromoo balleesisaa jira.
Ministeera qonnaa keessa caasaan nafxanyootaa bara dheeraaf diriire yeroo ammaa kana immoo hidda dheereffatee saamichati jirti. Namoota Ingiliffaan maqaa isaanii ibsachuu hin dandeenye pirojektootaa irratti ramadamanii hojjechiisu. Saamicha qarshii pirojektootaa malee waan uummataaf ta’u kan hojjetan hin jiru. Warreen kun “የደብረ ዘይት እና የናዝሬት ድግስ” jechuun torbaniin Sanbata Xiqqaa fi Dilbata workshop uumuun wal yaamanii durgoo “Iqqubiif” ta’u funaannachaa oolti. Namoota Afaan Amaarignaa isaaniitii sarara lama gabaasa barreessuu hin dandeenyetu itti gaafatummaa xiqqaa hanga olaanaati qabatanii jiru. Hojiin walii galatti du’eera.
Obbo Umar otoo kana arguu callisee jiraachaa jira. Hoganaa waajjira tokkoo otoo hin taane nama sirna kanatti mufateeru fakkaata? Wayita ijoolleen keenya rakkoo isa dhibee jiru haasofsiisuuf yaalan fedhii hin qabu. Hojjettoota Oromoo ijaan arguuf hin barbaadu.Walii galatti mana hojii sadarkaa federaalaa cufa keessati haala wal fakkaataatu jira. Hojjettootiin Oromoo sadarkaa federaalaati baay’ina hin qabu. Kan jiru illee yeroo kamii caala dhiibbamee jira. Kun immoo balaa guddaa akka qabu beekamee furmaata waaraa barbaada.”